သမ္မာကျမ်းစာ > သမ်မာကမျြးသင်တန်း > သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်
Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit und geht ewig vom Vater durch den Sohn aus. Er ist der von Jesus Christus verheissene Tröster, den Gott allen Gläubigen sandte. Der Heilige Geist lebt in uns, vereint uns mit dem Vater und dem Sohn und verwandelt uns durch Reue und Heiligung und gleicht uns durch ständige Erneuerung dem Bild Christi an. Der Heilige Geist ist die Quelle der Inspiration und Prophetie in der Bibel und die Quelle der Einigkeit und Gemeinschaft in der Kirche. Er schenkt geistliche Gaben für das Werk des Evangeliums und ist des Christen ständiger Wegweiser zu aller Wahrheit (Johannes 14,16; 15,26; တမန်တော်များ၏ လုပ်ရပ်များ 2,4ဝ.၁၇-၁၉.၃၈; မဿဲ ၂8,19; ယော ၁4,17နှစ်ဆယ် 1. ဓာတ်ဆီ 1,2; တိတု 3,5; 2. ဓာတ်ဆီ 1,21; 1. ကောရိန္သု ၁2,13; 2. ကောရိန္သု ၁3,13; 1. ကောရိန္သု ၁2,1စာ-၁၁; တမန်တော် ၂၀:၂၈; ယော ၁6,13).
Die Heilige Schrift schreibt dem Heiligen Geist auch Eigenschaften von Persönlichkeit zu und hebt das Profil des Geistes in der Folge über blosse Funktionalität hinaus. Der Heilige Geist hat einen Willen (1. ကောရိန္သု ၁2,11: "ဒါပေမဲ့ ဒါတွေအားလုံးဟာ တစ်ခုတည်းသော စိတ်ဓာတ်နဲ့ လုပ်ဆောင်ပြီး တစ်ယောက်ချင်းစီကို သူ့အလိုဆန္ဒအတိုင်း ပေးအပ်ပါတယ်")။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ရှာဖွေ၊ သိရှိ၊ သွန်သင်ပေးကာ ခွဲခြားဆက်ဆံသည် (1. ကောရိန္သု 2,10-13) ။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် စိတ်ခံစားမှုများရှိသည်။ ကျေးဇူးတော်၏သဘောကို ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချနိုင်သည်။ (ဟေဗြဲ၊ 10,29) ဝမ်းနည်းခြင်းရှိကြလော့။ (ဧဖက် 4,30) သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို နှစ်သိမ့်ပေးပြီး၊ ယေရှုကဲ့သို့ပင်၊ အထောက်အမဟုခေါ်သည် (ယော ၁4,16). In anderen Abschnitten der Heiligen Schrift spricht der Heilige Geist, er gebietet, bezeugt, wird belogen und tritt ein. All diese Begriffe stehen im Einklang mit Persönlichkeit.
Hiob 33,4 မှတ်ချက်များ– “ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် ငါ့ကိုဖန်ဆင်း၍၊ အနန္တတန်ခိုးရှင်၏ ထွက်သက်တော်သည် ငါ့ကို အသက်ပေးတော်မူ၏။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဖန်ဆင်းသည်။ ဝိညာဉ်တော်သည် ထာဝရဖြစ်သည် (ဟေဗြဲ 9,14) အလုံးစုံ ပြည့်စုံတော်မူသည် (ဆာလံ ၁၃9,7).
ကျမ်းချက်များကိုစူးစမ်းလေ့လာပါ။ ထိုစိတ်သည်အသိဉာဏ်ရှိသူ၊ ဤအရာအားလုံးသည်ဘုရားသခင့်ဂုဏ်သတ္တိများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သမ္မာကျမ်းစာကသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဘုရားဟုခေါ်ဆိုသည်။
Eine grundlegende Lehre des Neuen Testaments ist, dass es einen Gott gibt (1. ကောရိန္သု 8,6; ရောမ 3,29နှစ်ဆယ် 1. တိမောသေ 2,5; ဂလာတိ 3,20). Jesus deutete an, dass er und der Vater die gleiche Göttlichkeit teilten (Johannes 10,30).
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဘုရားတစ်ပါးဖြစ်လျှင်သူသည်သီးခြားဘုရားသခင်ဖြစ်သလော။ အဖြေကတော့ငြင်းစရာမဟုတ်ပါ။ သို့ဆိုလျှင်ဘုရားသခင်သည်တစ်လုံးတည်းမဟုတ်ပါ။
၀ ါကျတည်ဆောက်ပုံတွင်တူညီသောအလေးချိန်ရှိသည့်အမည်များပါသောသမ္မာကျမ်းစာကခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
မဿဲ ၂8,19 heisst es: «…taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes». Die drei Bezeichnungen sind unterschiedlich und haben den gleichen linguistischen Wert. In ähnlicher Weise betet Paulus in 2. ကောရိန္သု ၁3,14, dass «die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit euch allen sei». Petrus erklärt, dass Christen «ausersehen wurden durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi» (1. ဓာတ်ဆီ 1,2).
Daher nehmen Matthäus, Paulus und Petrus deutlich die Unterschiedlichkeit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes wahr. Paulus sagte den Bekehrten in Korinth, dass die wahre Gottheit keine Sammlung von Göttern ist (wie das griechische Pantheon), wo jeder unterschiedliche Geschenke gibt. Gott ist Einer [eins], und es ist «ein [derselbe] Geist… ein [derselbe] Herr… ein [derselbe] Gott, der da wirkt alles in allem» (1. ကောရိန္သု ၁2,4-6). Später erklärte Paulus mehr über die Beziehung zwischen Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Sie sind keine zwei separaten Einheiten, er sagt in der Tat «der Herr» (Jesus) «ist der Geist» (2. ကောရိန္သု 3,17).
Nach dem Tod der neutestamentlichen Apostel kam es innerhalb der Kirche zu Diskussionen, wie die Gottheit verstanden werden konnte. Die Herausforderung bestand darin, die Einheit Gottes zu bewahren. Verschiedene Erklärungen legten Konzepte von «Bi-Theismus» (zwei Götter – Vater und Sohn, aber der Geist ist nur eine Funktion von jedem oder beiden) und Tri-Theismus (drei Götter – Vater, Sohn und Geist), aber dies widersprach dem grundlegenden Monotheismus, dem man sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament findet (Mal 2,10 စသည်ဖြင့်)။
သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၊ သမ္မာကျမ်းစာတွင်မတွေ့ရသည့်အမည်ကိုဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ခုတည်းအတွင်း၌ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တို့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆက်စပ်ပုံကိုဖော်ပြရန်အစောပိုင်းချာ့ချ်ဖခင်များတီထွင်ခဲ့သောစံပြတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းဝင်သုံးပါးနှင့်မှားယွင်းသောဘာသာရေးအယူမှားများကိုဆန့်ကျင်။ အယူမှားနိုင်ငံရေးဝါဒကိုတိုက်ဖျက်သည်။
Metaphern können Gott nicht voll als Gott beschreiben, aber sie können uns helfen, eine Vorstellung davon zu bekommen wie die Dreieinigkeit zu verstehen ist. Ein Bild ist der Vorschlag, dass ein Mensch drei Dinge auf einmal ist: Genauso wie ein Mensch Seele (Herz, Sitz der Gefühle), Körper und Geist (Verstand) ist, so ist Gott der mitfühlende Vater, der Sohn (die Gottheit leibhaftig – siehe Kolosser 2,9), und der Heilige Geist (der allein die göttlichen Dinge versteht – siehe 1. ကောရိန္သု 2,11).
သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူကိုဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းများမှအငြင်းပွားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီတော့ z ။ (ခ) အနောက်တိုင်းရှုထောင့်သည် ပို၍ အဆင့်မြင့်ပြီးငြိမ်သက်နေပြီးအရှေ့အမြင်အရခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်မိတ်သဟာယတွင်အမြဲလှုပ်ရှားမှုရှိသည်။
ဓမ္မပညာရှင်များသည် လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေးသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူနှင့် အခြားအယူအဆများကို ပြောဆိုကြသည်။ သို့ရာတွင်၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့် ဝိညာဉ်တော်သည် သီးခြားအလိုဆန္ဒများ သို့မဟုတ် ဆန္ဒများ သို့မဟုတ် တည်ရှိနေကြောင်း ညွှန်ပြသော မည်သည့်သီအိုရီကိုမဆို ဘုရားသခင်သည် တစ်ဆူတည်းဖြစ်သောကြောင့် စစ်မှန်သော (ထို့ကြောင့် မှားယွင်းသောအယူဝါဒ) အဖြစ် ရှုမြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့် ဝိညာဉ်တော်၏ဆက်ဆံရေးတွင် ပြီးပြည့်စုံပြီး တက်ကြွသောမေတ္တာ၊ ရွှင်လန်းမှု၊ သဟဇာတရှိပြီး အကြွင်းမဲ့စည်းလုံးမှုရှိသည်။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ဆုတောင်းခြင်းသည်ခမည်းတော်ကိုအဓိကထားသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဆုတောင်းရန်ကျမ်းစာကမတောင်းဆိုပါ။ ခမည်းတော်ထံကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းသောအခါသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဘုရားသခင်၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ထံဆုတောင်းပါမည်။ နတ်ဘုရားတို့၏ကွဲပြားခြားနားမှုများသည်ဘုရားသုံးပါးမဟုတ်ပါ။
ထို့အပြင်ယေရှု၏နာမ၌ဆုတောင်း။ ဗတ္တိဇံခံခြင်းသည်ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်၊ သခင်ယေရှုခရစ်နှင့် ၀ ိညာဉ်တော်သည်တလုံးတဝတည်းဖြစ်သောကြောင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဗတ္တိဇံသည်ခရစ်တော်၏ဗတ္တိဇံတရားနှင့်မတူနိူင်၊
Der Geist wird von jedem im Glauben empfangen, der bereut und im Namen Jesu zur Vergebung der Sünden getauft wird (Apostelgeschichte 2,38 39; ဂလာတိ 3,14). Der Heilige Geist ist der Geist der Sohnschaft [Adoption], der mit unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Gottes Kinder sind (Römer 8,14-16), und wir sind «mit dem Heiligen Geist, der verheissen ist, versiegelt, welcher das Unterpfand unseres geistlichen Erbes ist (Epheser 1,14).
Wenn wir den Heiligen Geist haben, dann gehören wir zu Christus (Römer 8,9). Die christliche Kirche wird mit dem Tempel Gottes verglichen, weil der Geist in den Gläubigen wohnt (1. ကောရိန္သု 3,16).
Der Heilige Geist ist der Geist Christi, der die Propheten des Alten Testaments motivierte (1. ဓာတ်ဆီ 1,10-12), die Seele des Christen im Gehorsam gegenüber der Wahrheit reinigt (1. ဓာတ်ဆီ 1,22), zum Heil befähigt (Lukas 24,29), heiligt (1. ကောရိန္သု 6,11), göttliche Frucht hervorbringt (Galater 5,22-25), und uns für die Verbreitung des Evangeliums und der Erbauung der Kirche zurüstet (1. ကောရိန္သု ၁2,1-11; ၂၈.၃4,12; ဧဖက် 4,7-16; Römer 12,4-8) ။
အဓိကသမ္မာကျမ်းစာအမှန်တရားမှာဘုရားသခင်သည်ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အသက်တာကိုပုံသွင်းသည်။ ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့် ၀ ိညာဉ်တော်၏မျှဝေဖွယ်ကောင်းသောလှပသောပေါင်းသင်းမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်အားလူ့ဇာတိအားဖြင့်ဘုရားသခင်အဖြစ်သူ၏အသက်တာ၊ သေခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်တက်ကြွခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုနေရာချထားသည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏မိတ်သဟာယဖြစ်သည်။